Uma sifikile ekhaya ngemva kosuku olude nokusebenza kanzima lukhathele futhi lukhathele, sidinga ukuphumula kanye nokuphumula okugcwele. Kodwa-ke, noma ngabe yini esikwenzayo emva komsebenzi emahoreni kusihlwa, lapho sisekhaya, umbala wombala wezangaphakathi unethonya elinamandla eholidini lethu. Leli qiniso selivele lisungulwe ngokucacile yizengqondo. Ngakho-ke, ukuze sibuyise ngokugcwele amandla ethu futhi senze isimo sengqondo esithokozile, kuyosisiza ngathi ukucabangela ithonya lesikali sombala kukhwalithi yokuphumula eminye imininingwane eminye.
Ukuze sikwazi ukubuyisela amandla nokusebenza kahle, ngamunye wethu unendlela yakhe eyintandokazi yokuziphumula ekhaya: othile ukhulula esitokisini sesitulo esithambile phambi kwesikrini se-TV, omunye ukhuluma ekhishini ngenkezo yetiyi nezihlobo zakhe nabangane bakhe, futhi othile uthanda nje ukwenza zonke izinhlobo zemisebenzi yasendlini. Kodwa kuzo zonke lezi zimo sisegumbini elihlotshiswe kuhlelo oluthile lombala. Kungakhathaliseki ukuthi siyayithanda yini noma cha, ama-shades ahlukene angaphakathi ahlala esithinta kakhulu ngokwengqondo, ngaleyo ndlela anciphisa noma athuthukise ikhwalithi yokunye.
Ngakho-ke, ithonya elithile ekuphumuleni kwethu linikwe umhlobiso wombala wezangaphakathi?
Masiqale ngeqiniso lokuthi izinhlobo ezikhona zemibala zingahlukaniswa ngamaqembu amabili: amathoni afudumele nabandayo. Ukuze amathoni afudumele angabizwa ngokuthi ophuzi, i-orange, ukhilimu, ama-shades obomvu, nokubandayo - okwesibhakabhaka, okwesibhakabhaka, okubomvu, amathoni aluhlaza okwesibhakabhaka. Yiqiniso, ingaphakathi lingavamile ukuba lihlotshwe ngombala owodwa, ezimweni eziningi umbala wombala wekamelo ufaka phakathi eminye imibala ngesikhathi esisodwa. Kodwa-ke, njalo endaweni yangaphakathi ethile, noma yimuphi umbala ukhulu kakhulu maqondana namanye amathoni. Lona mthunzi obala kakhulu futhi uzoba nethonya elikhulu kakhulu kwikhwalithi yeholidi lakho ngenkathi kulesi gumbi.
Umbala wombala ofanelekayo okwazi ukuzuza umphumela omuhle emzimbeni wethu emva kosuku olusebenzayo lubhekwa njengamathoni afudumele. Okungcono kungaphakathi ngaphakathi egumbini lokuphumula, lapho uthanda ukuphumula khona ngemva komsebenzi onzima, ukuhlobisa ohlelweni lombala oluphuzi. Lezi shades zizosiza ngokushesha ukuzolalisa isimiso sezinzwa futhi ziyobathonya ukwakheka kwemizwa ejabule. Ngaphezu kwalokho, kunesinye isici esithakazelisayo kakhulu futhi esiwusizo kuwo wonke amathoni aphuzi okwesibhakabhaka: uma ulenga "amakhethini aphuzi" ekamelweni, lapho uvuka ekuseni emva kwephupho, ngisho nasezimvula ezithambile ezithambile emgwaqweni, ukuthi igumbi ngokusebenzisa lezi zindwangu lidabula imisebe yelanga. Akusizi ngalutho ukufakazela ngokuningiliziwe ukuthi ukuzwa okunjalo kuzosiza ekuthuthukiseni izinga leholide lakho. Zama ukusebenzisa le ndlela - ezingeni lezingqondo zisebenza nakanjani!
Kodwa umbala obomvu awunakwenzeka ukuhambisana nendawo yangaphakathi egumbini lokuphumula. Naphezu kokuthi le mthunzi ibhekisela emathonjeni afudumele, izobe nomthelela omubi kwizinga lokuzilibazisa. Ukuthi umbala obomvu nokuvezwa isikhathi eside kubathengisi bethu ababukwayo kunomthelela ekwandiseni ukucasuka futhi kubangele ukuzwakalisa isimiso sezinzwa ngokweqile, futhi ukuphumula okuphumule nokuphumula kusihlwa ukuphendula okunjalo komzimba kuyoba okungathandeki kakhulu.
Imibala eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okwesibhakabhaka nohlaza okwesibhakabhaka yomklamo wendawo yangaphakathi kuyoba nomphumela wokuqeda isimiso sezinzwa. Ukuhlala egumbini elihlotshiswe ngemibala enjalo kuyoba usizo ngesikhathi sokuphumula ngemuva kokuphikisana emsebenzini. Nokho, ukuhlala ngaphakathi kwekamelo, okuhlotshiswe ngemibala enjalo ebandayo, akufanele kube yinde kakhulu. Uma kungenjalo, emva kokunciphisa isimo sakho sengqondo sizoqala ukuwohloka futhi awunakwenzeka ukuba wenze imisebenzi yasekhaya ngenkuthalo - kunalokho, uzovakashelwa isifiso sokucabangela konke okwenzekayo kanye nokucwiliswa okujulile emicabangweni yakho.
Futhi-ke, akufanele nakanjani uchithe ukuphumula kwakho ngaphakathi, okuhlotshiswe ngamathoni amnyama, amnyama. Lezi zigaba zambala zombala zingaba nomphumela ocindezelayo ohlelweni lwethu lwezinzwa, ngakho izinga lokuphumula kulokhu luzoba lubi kakhulu.
Ngakho-ke, ukukhetha imininingwane yezinto zangaphakathi endlini yakho, cabanga kusengaphambili mayelana nethonya lomklamo wombala wamakamelo ngekhwalithi yokuphumula.
Indlela yokuhlela ibheji emoyeni ovulekile
Indlela yokugubha ngoFebruwari 14
Ukuncintisana kwebhizinisi emvelweni
Indlela yokuthenga amathikithi ashibhile emoyeni
Kungani siqamba amanga?
Sihlanza amathumbu we-toxin
Izakhiwo eziwusizo ze-pear porridge
Kungani kungabikho isifiso somyeni futhi lokhu kunganqotshwa?
Ukupheka kwabantu ngenxa yezimonyo zesandla
Izinyathelo zokuvimbela ukulawula igciwane lesandulela ngculazi
Isitayela se-Provence emklamo wangaphakathi
Ukuziphatha kobudlelwane bebhizinisi phakathi kwendoda nowesifazane
Ukuthutha izilwane ezifuywayo endizeni
Isinkwa esiphundu nge shizi nama-mushroom
I-oli yama-dandruff - amathiphu kanye nokupheka okuwusizo
Ukuzivocavoca kwabesifazane: imfanelo ye-yoga
Imifino enomusi wayo
Itidi edayayo nge-mint ne-apula